Ku Dhaqanka Qaanuunka iyo Ammaanka | UNSOM
KOOXDA SARRAYNTA SHARCIGA & HAY’ADAHA AMMAANKA (ROLSIG)
Kooxda sarraynta sharciga iyo hay’adaha ammaanka (ROLSIG) waxay leedahay lix waaxood:
Hub-ka-dhigista, Kala-diridda iyo Dhaqancelinta (DDR)
Maareynta Khatarta Walxaha-qarxa,– oo ay qabato Adeegga Miino Baarka QM (UNMAS)
Isku-dhafka Garsoorka iyo Asluubta
Booliska – oo uu hoggaamiyo taliyaha Booliska UNSOM
Dib-u-Qaabaynta Laamaha Amniga, kaas oo u kala baxa saddex qaybood:
Dib-u-habeynta Aagga Gaashaandhigga – oo uu hoggaamiyo lataliyaha sare ee UNSOM u qaabilsan dhanka Militariga
Qaab-dhismeedka Ammaanka Qaranka
ROLSIG waxay awood salballaaran u leedahay taageeridda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, iyo haddii loo baahdo AMISOM, gaar ahaan u fidinta isku-xirka, fududeynta iyo talo-bixin la xiriirta saabinta siyaasadda dhanka sharci fulinta iyo hay’adaha amniga.
Si gaar ah haddii loo cabbiro, hawsha ROLSIG ’s waxay dabooshaa:
Fududeynta wada-xaajood dhexmara saamileyda kala duwan – Soomaali iyo caalamiba – ee qaab-dhismeedka mustaqbalka ku dhaqanka sharciga iyo hay’adaha amniga ee heer Federaal iyo mid Dowlad Goboleed;
Tayeynta awoodda urureed, qofeed iyo hawlgal, iyadoo loo marayo barnaamijyo tababar iyo gardaadin isugu jira, kuna qotoma aagagga sharci fulinta iyo amniga;
Taageero xoghayn iyo fududeyn oo loo fidiyo Kooxaha Hawlwadeennada ah iyo golayaasha kale ee muhiimka u ah wada-xaajoodyada;
Isku-dubbaridka taageerada deeq-bixiyeyaasha ee mashaariicda kala duwan, sida xarumaha dayactirka dagaallameyaasha waantoobay ee Al-Shabaab, tababarka hawwadeennada aagga amniga iyo sharciga fulinta, dhismaha kaabayaasha, gaar ahaan xarumaha garsoorka iyo asluubta, iyo bixinta gunnooyinka shaqaalaha aagga amniga;
Ka caawinta Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya gudashada xilalka ka saaran u hoggaansamidda xeerarka caalamiga ah, sida xayiraadda Golaha Ammaanka ee hubka.
Iyadoo laga duulayo Xirmada Heshiiska Cusub ee Soomaaliya (Somali New Deal Compact), Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay asteysay Shan yool oo nabadda iyo dowladnimada lugu dhisayo (PSGs). Diiradda ROLSIG waxay foogan tahay yoolasha 2 & 3.
Yoolka 2-aad wuxuu diiradda saarayaa hay’adaha amniga, waxaana looga golleeyahay in lugu abuuro hay’ado mideysan, karti iyo hufnaan leh islamarkaana xaq ku dhisan oo heer federal ah, ku waas oo daryeel aas-aasi ah, oo ammaan iyo bedbaado u fidiya dadweynaha Soomaaliyeed.
Mudnaanta yoolka 2-aad waxay kala yihiin:
Kaabidda karaanka iyo hufnaanta hay’adaha ammaanka ee dowladda, si ay dalka u xoreeyaan, u xasiliyaan islamarkaana adeeg amni iyo bedbaado dadweyne u fidiyaan;
Isku-dhafka ciidamada ammaanka, si looga dhigo hay’ado qaran;
Fulinta Barnaamij qaran oo loogu talogalay daaweynta iyo dhaqancelinta dagaallameyaasha ka waantooba;
Horumarinta qorshe wax-ku-ool ah oo lugu sugayo ammaanka badaha, iyadoo loo marayo Kheyraad Badda iyo Istiraatijiyadda Ammaanka.
ROLSIG waxay hoggaanka u haysaa, marka la eego taageerada UNSOM ee yoolka 2-aad. Mas’uuliyadda guud, oo ay ku jirto taageerada xoghaynta, waxay hoos tagtaa cutubka Qaab-dhismeedka Amniga Qaranka ee Qaybta Dib-u-habeynta Laamaha Ammaanka, oo gacan ka helaya qaybo kale oo ammaanka ku lug leh.
Yoolka 3-aad wuxuu ku foogan yahay garsoorka iyo asluubta, waxaana looga golleeyahay in dhidibada loogu taago hay’ado garsoor oo madaxbannaan oo huffan, ku waas oo awood u leh in ay daboolaan baahida garsoorka ee dadka Soomaaliyeed, iyagoo u fidinaya adeeg garsoor oo loo siman yahay.
Mudnaanta yoolka 3-aad waxay kala yihiin:
Sharuuc laf-dhabar u ah hannaanka sharciga, sida dib-u-habeynta garsoorka, oo la jaanqaadaya Dastuurka iyo sharuucda caalamiga ah;
Hay’adaha Garsoorku in ay billaabaan wax ka qabashada cabashooyinka Soomaalida;
Dad badan oo Soomaaliyeed in ay fursad u helaan garsoor xaq ah, lana goyn karo.
Qaybta Asluubta iyo Garsoorka Isku-dhafka ah ayaa UNSOM ugu qaybsan Yoolka 3-aad, islamarkaana mas’uul ka ah fidinta taageero xoghayn iyo xiriirinta.